Warka MOTOROLA: Daahfurka, Taleefoonada, Kiniiniyada iyo Waxbadan - Androidsis | Androidsis (Bogga 3)
Tani waxay ahayd Moto 360 raqiis ah oo Motorola baajisay
Motorola waxay soo bandhigtay jiilkeeda cusub ee smartwatch-ka caanka ah ee IFA. Si kastaba ha noqotee, shirkadda Mareykanka ayaa haysatay Moto 360 raqiis ah oo ay joojisay.
Hadda waa suurtagal in lagu iibsado Moto X Play qiimo aan laga adkaan karin, ugu yaraan kan cad!
Mar horeba waa suurtagal in lagu iibsado Moto X Play qiimaha ugu fiican, ugu yaraan midabka caddaanka ah ee ka yar 350 euro halka midabka madow, si aan la fahmi karin u leeyahay qiimo ku dhow 42 euro.
Motorola wuxuu illoobayaa gyroscope-ka ku jira Moto X Play
Motorola ayaa ilowday gyroscope-ka ku jira Moto X Play taasoo layaab ku noqotay dad badan oo adeegsada inay yihiin qalab ku kacaya € 400
Moto G 2015 Dib u eegis: Niyad jab weyn ayaa sanadkan
Dib-u-eegistaan ​​'Moto G 2015 Review' waxaan ku barineynaa kahor qof kasta oo kale wax kasta oo ay naga siiso terminaalkan cusub ee Motorola.
Isbarbardhiga Moto X Play Vs Samsung Galaxy S6
Isbarbardhig halka aan dhigno Moto X Play iyo Samsung Galaxy S6 fool ka fool, midkee ayaa ugu fiican?
Isbarbardhigga u dhexeeya Moto G 2014 iyo Moto G 2015
Isbarbardhig halka aan dhigno Moto G 2015 iyo Moto G 2014 fool ka fool, taas oo uu jiro guuleyste cad oo laga yaabo inay tahay mid ka mid ah sharadyada ugu fiican.
DxOMark wuxuu kujiraa Moto X Style sida casriga seddexaad ee leh kamarada ugufiican
DxOMark benchmarking-ka, Moto X Style-ka waxaa loo dhigaa inuu yahay taleefanka saddexaad ee ugu fiican waxa ay tahay kamaraddu. Wax yar
Moto X Play, casriga casriga ah ee Android
Moto X Play wuxuu noqon karaa taleefanka casriga ah ee saxda ah ee hadda wata qalab aad u fiican, naqshad aad u fiican taasna waxay ku imaaneysaa qiimo ka hooseeya qaabka iyo € 399.
Motorola wuxuu soo bandhigayaa 2015 Moto G: 5 ″ shaashad, Snapdragon 410 iyo 13MP camera
Moto G 2015 cusub oo ka socota Motorola oo leh shaashad 5-inch ah, kamarad 13 MP ah iyo Snapdragon 410 chip oo ah € 199.
Moto X Style, ayaa soo bandhigay astaanta cusub ee Motorola
Motorola waxay soo bandhigtay Moto X Style, astaanta cusub ee soo saaraha oo ujeedadeedu tahay inay suuqa jabiso iyadoo ay ugu wacan tahay qiimaha lacagta
Sida loola socdo dhacdada bandhigga Motorola oo si toos ah u socota. Maanta waa maalin weyn !!
Maanta waxaan kugu martiqaadeynaa inaad si toos ah ugala socoto munaasabadda soo bandhigida Motorola.
Fnac waxay daabacdaa qeexitaannada iyo qiimaha horudhaca Motorola Moto G 2015
Motorola Moto G 2015 cusub ayaa shaaca ka qaaday qiime la sheegay iyo qeexitaano laga sameeyay websaydhka Fnac. Faahfaahinta rasmiga ahi ma xaqiijinayso mana diidin.
Dhacdooyinka qulqulka Motorola ee loogu talagalay Luulyo 28, 2015. Maxaad dooneysaa inaad noo soo bandhigto?
Maanta waxaan helnay xaqiijinta rasmiga ah ee munaasabadda socodka gawaarida ee Motorola bisha soo socota ee July 28, 2015 saacaddu markay tahay 15:XNUMX pm.
Sawirro cusub oo Moto G 2015 ah ayaa xaday
Motorola iyo xogaha sifiican iskuma waafaqsana, markalena, waxaan arki karnaa sawiro cusub oo mustaqbalka Moto G 2015 ah.
Moto G 2015 waxaa la soo bandhigi karaa July 28
Jiilka soo socda ee xarunta Mareykanka, Moto G 2015, waa la soo bandhigi karaa July 28.
Dib u eeg Moto G 4G
Maanta waxaan kuu keenaynaa dib u eegista Moto G 4G si aad ugu aragto hawlgalka wax kasta oo noocan cusub ee Moto G 2014 oo leh LTE isku xirnaanta uu na siinayo.
Motorola wax dan ah malahan sii deynta kaniini, hada
Shirkadda Mareykanka ah ee Motorola ayaa caddeysay in aysan wax dan ah ka lahayn, xilligan, in ay soo saaraan kiniin.
Moto X soo socda ee 2015 ayaa soo bixi kara bisha Ogosto
Maamulaha guud ee Motorola, wuxuu ku dhawaaqay in noocyada kala duwan ee qalabka Motorola la cusbooneysiin doono sanad walba, marka Moto X 2015 wuxuu soo baxayaa Ogosto
Moto E 2015 barbaro waxaa iska leh Androidsis iyo Motorola Spain
Ma rabtaa inaad ku guuleysato Motorola Moto E 4G cusub? Hadday jawaabtu haa tahay, kaqeybqaado Moto E 2015 Bixinta ee Androidsis iyo Motorola Spain ay ku siinayaan gabi ahaanba qarashyada dhoofinta bilaashka ah.
Iibsiga Motorola Moto E 2015 hadda waa suurtagal iyada oo loo marayo Amazon Spain
Waxaan horey u heysanay Terminalka cusub ee Motorola ee iibka ah ee khadka tooska ah, marka haddii aad rabto inaad iibsato Moto E 2015 halkan waxaan kuu sheegeynaa meesha iyo sida
[Video] Falanqaynta Moto E 2015, waxaan si fiican u tijaabinay Motorola yar
Halkan waxaan kaaga tagayaa falanqeyntan dhameystiran ee 'Moto E 2015', oo ah terminal loogu yeero inuu xukumo qeybta hoose ee dhammaadka Android, oo si wanaagsan uga tirsanaan karta bartamaha kala duwan oo leh qeexitaanno farsamo ee xakameynta xannibaadda oo ah kaliya 129 euro.
[Muuqaal] Shaqo laga yaabo inaadan ka aqoon Moto 360
Xaqiiqdii haddii aadan Smartphone ka laheyn soo saaraha Motorola, sida aniga oo kale illaa iyo haatan, ma ogaan doontid shaqadan Moto 360.
Dhacdo soo bandhigid cusub oo Motorola Moto E 4G ah, Moto aan la Xirxirin E 4G meel kasta oo aad doorato!
Laga soo bilaabo Androidsis waxaan kugu martiqaadeynaa munaasabaddan gaarka ah, Moto-jabinta Moto E 4G meel kasta iyo goor kasta oo aad rabto.
Motorola Moto E 4G cusub ayaa hada rasmi ah. Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan qeexitaankeeda farsamo iyo qiimaha rasmiga ah
Waxaan horeyba u ogaanay dhammaan tilmaamaha rasmiga ah ee Motorola Moto E 4G.
Muxuu yeelan doonaa sanduuqa qarsoodiga ee Motorola?
Mala awaalkeyga xoogaa cajiib ah oo ku saabsan waxyaabaha ku jira sanduuqa qarsoodiga ee Motorola
Dhammaan macluumaadka Moto E 2015 cusub waa la sifeeyey
Hadda dhammaan macluumaadka ku saabsan Moto E 2015 cusub waa la soo daayay, laga soo qaaday sawirro xaqiijinaya nashqadda aan aragnay waqtigaas iyo astaamaha farsamo ee Moto E 2015, jiilka cusub ee soo saaraha E kala duwanaanshaha ay dhowaan heshay Lenovo
Motorola wuxuu sharxayaa sababaha aysan u dhexgalin aaladda sawirka faraha
Hawlwadeen hore oo Motorola ah ayaa sharraxaya sababta Nexus 6 ugu dambayn u lahayn dareeraha faraha
Aaway cusboonaysiinta Lollipop ee Moto G 2014?
Xaqiiqda dhabta ah ee cusbooneysiinta loogu talagalay 'Android Lollipop' ee loogu talagalay 'Moto G 2014', ugu yaraan Spain, waa chimera maadaama waqtigan xaadirka ah wali aan wax war ah laga haynin qiyaasta loo ballanqaaday ee lollipop Android.
Motorola cusub ayaa mareysa FCC Moto E 2015 aragga?
Motorola waxay soo martay FCC taleefoon casri ah oo cusub oo leh magac lambar IHDT56QF1 Miyaynu aragnaa Moto E 2015 cusub?
Android 5.0 Lollipop Goor dhow 2013 iyo 2014 Qalabka Motorola
Motorola waxay cusbooneysiin doontaa dhammaan qalabkeeda la sii daayay 2013 iyo 2014 ilaa 5.0 Lollipop. Cusbooneysiin la sugayo.
Waxaan falanqeyneynaa waxa fure weyn u ah guusha Motorola ee dhigeysa shirkadda Waqooyiga Ameerika inay tahay mid ka mid ah tixraacyada ugu waaweyn ee lagu raacayo adduunyada boosteejooyinka nidaamka hawlgalka Android.
Wax kasta oo nooca cusub ee Android Wear 5.0.1 na siiya Moto 360
Maanta waxaan ku tusayaa wax kasta oo Android Wear 5.0.1 nagu siinayo Moto 360, cusbooneysiinta cusub ee maanta timid ee OTA.
Motorola ayaa horay u sii daayay OTA si ay u cusbooneysiiso Moto X 2014 ilaa Android 5.0 Lollipop, oo si tartiib tartiib ah u gaari doonta moodooyinka Yurub
Motorola waxay diyaarin laheyd DROID Phablet la mid ah Nexus 6 laakiin leh astaamo kafiican
Motorola waxay diyaarin laheyd qalab cusub oo DROID ah oo naqshad la mid ah Nexus 6 laakiin leh qaabab ka wanaagsan
Motorola waxay daabacdaa afar ogeysiis ah Moto 360 oo ku faaneysa naqshadeeda qaaliga ah
Motorola ayaa hadda soo saartay afar ogeysiis cusub oo loogu talagalay Moto 360, iyada oo kor u qaadeysa nashqadda ugu sarreysa ee casriga ah ee casriga ah.
Moto G 2013 wuxuu durbaba qaataa Android 5.0 Lollipop
Haa, Motorola markale ayey sameysay. Moto G ee sanadka 2013 wuxuu durbaba helayaa ogeysiis la filayo si loo helo cusbooneysiinta Android 5.0
Sifooyinka suurtagalka ah ee dhaxalka Moto E waa la sifeeyaa
Ma jiri doonaa jiil labaad oo ah taleefanka casriga ee ugu jaban Motorola? Sida laga soo xigtay ragga ka socda Techmaniacs, haa oo xitaa way ku dhiirranayaan inay ka hadlaan astaamaha farsamo ee qofka ku beddelaya Motorola Moto E
Moto G 2014-ka cusub, oo ah nooca woqooyiga Ameerika, ayaa durbaba helaya cusbooneysiinta loo yaqaan 'Android 5.0 Lollipop' oo loo maro OTA. Qodob kale oo ay calaamadeeyeen Motorola
Moto G 2014 sidoo kale waa loo cusbooneysiin doonaa Android Lollipop kahor dhamaadka sanadkan
Warka noocan oo kale ah, igama yaabineyso in Motorola ay kasbatay kalsoonida macaamiisheeda, Moto G 2014 sidoo kale wuxuu heli doonaa qiyaasta Lollipop kahor dhammaadka sannadkan 2014.
Motorola France waxay xaqiijineysaa in Moto Maxx uusan imaan doonin Yurub
In kasta oo ay tirtireen farriinta, bogga Twitter-ka ee Motorola France ayay ku shaaciyeen in Moto Maxx uusan ugu dambeyn imaan doonin Yurub.
Waa tan sida loo cusbooneysiiyo Moto X 2014 ilaa Android 5.0 Lollipop iyadoo la adeegsanayo firmware kii ugu horreeyay ee xaday oo la sii daayay dhowr saacadood ka hor.
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee Android Lollipop on Moto X 2014
Waxaan horey u haysannay fiidiyowgii ugu horreeyay halkaas oo aan ku arki karno sida loo yaqaan 'Android Lollipop' ay u egtahay Moto X 2014, terminaalka noqon kara kii ugu horreeyay ee qaata Android 5.0 adoo adeegsanaya OTA.
Motorola waxay gacanta ku heysaa Moto G 2014 4G cusub
Motorola waxay mar kale kasbatay dib-u-eegis xushmad leh saxaafadda khaaska ah oo leh noocyo cusub oo casri ah. Labadooda Moto G 2014 cusub iyo Moto X 2014 labaduba waxay ahaayeen guul layaableh waxayna umuuqataa in soosaaraha saldhiggiisu yahay Illinois uu horey ushaqeyn lahaa Moto G 4G cusub
Moto X 2014 wuxuu noqon karaa terminaalkii ugu horreeyay ee qaata Android 5.0 Lollipop
Markaa haddii wax la dhammeeyo oo ay tahay haddii si rasmi ah hadda loo xaqiijiyay, Moto X 2014 wuxuu noqon lahaa terminal-kii ugu horreeyay ee hela Android 5.0 Lollipop
Motorola waxay ku soo bandhigtay Moto Maxx gudaha Brazil, aalad runtii soo jiidasho leh oo, hada, aysan imaan doonin Yurub
Liiska qalabka Motorola si loogu cusbooneysiiyo Android 5.0 Lollipop ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay
Liiska qalabka Motorola si loogu cusbooneysiiyo Android 5.0 Lollipop ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay.
Motorola Droid Turbo waxay bixisaa 48 saacadood oo ismaamul ah iyo waxyaabo aad u xiiso badan
Motorola ayaa hada soo bandhigtay Motorola Droid Turbo, oo ah taleefan casriyeysan oo leh astaamo aan caadi aheyn oo kaliya laga heli karo shirkada Verizon
Dhamaan amarada codka ee Moto 360. Ficil aad u macquul ah!
Halkan waxaad ku haysataa fiidiyowgaan adiga oo aan wax isdaba marin ah si aad u wada aragto dhammaan amarrada codka ee Moto 360. Qaar ka mid ah amarrada waxtarka badan leh laakiin taasi weli wax badan ayaa lagu hagaajinayaa
Halkan waxaan kaaga tagi doonaa liiska rasmiga ah ee rasmiga ah ee Motorola terminals ee heli doona Android Lollipop.
Tijaabada xawaaraha: LG G2 vs Moto X 2014
Waxaan horeyba u helnay tijaabo xawaare cusub oo Androidsis ah, markan waxaan wajahaynaa LG G2 vs Moto X 2014, ma waxaad u malaynaysaa inuu farqi badan u dhexeyn doono labada terminaal?
Waxaan si buuxda u tijaabinay Motorola Moto X 2014
Waxaan kuu lafagureynaa Motorola Moto X 2014 cusub si aan kuugu sheegno dhinacyada wanaagsan iyo kuwa xun.
Motorola waxay cusbooneysiisaa barnaamijka Motorola Radio FM ee Moto G iyo Moto E
Haddii aad leedahay Moto G ama Moto E waxaad hadda cusbooneysiin kartaa Motorola Radio FM, barnaamijka soo saaraha ee dhageysiga raadiyaha
Tijaabada xawaaraha: LG G3 vs Moto G 2014
Waxaan mar kale halkan la nimid tijaabada xawaaraha Androidsis maanta oo wajaheysa LG G3 vs Moto G 2014, shaki la'aan laba terminaal oo xamaasad leh oo lagu kala saaray qiime aad u fara badan.
Tijaabada xawaaraha: LG G2 vs Moto G 2014
Halkan waxaad ku haysataa tijaabadan xawaaraha ah ee aan ku wajahayno LG G2 vs Moto G 2014 si aad u aragto khibrada dhabta ah ee isticmaaleyaasha ee ay labada terminaal na siinayaan marka la eego fulinta barnaamijyada kala duwan.
Dib u eegista Moto G: waxaan si fiican u tijaabinnay casriga ugu wanaagsan ee dhexdhexaadka ah ee Android
Halkan waxaad ku haysataa falanqeyn fiidiyoow ah oo ku saabsan Moto G 2014, oo ah terminaal la doonayo in loogu yeero inuu la joogo cinwaanka taleefanka casriga ee ugu wanaagsan sanadka illaa inta laga hadlayo bartamaha dhexe ee Android.
Sida loo helo Root Moto G (2013)
Halkan waxaad kuheleysaa cashar dhammaystiran oo aad ku awoodi doontid inaad ku xididdo Moto G qaab aad u fudud.
Moto Cusub X
Falanqaynta New Moto X, dhamaadka-sare sare ee soo-saaraha taas oo ay doonayso inay ku istaagto Samsung S5.
Dareenka ugu horreeya ee leh Moto X cusub
Waxa loo balan qaaday waa deyn sidaa darteed waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeyn ku saabsan Moto X-da cusub
Waxaan tijaabinay Moto G-ga cusub, midka ugu fiican bartamaha-suuqa.
Waxaan awoodnay inaan tijaabinno Moto G-ga cusub ee indha sarcaadku muu fiicnaan karin.
Moto Voice waxay bixisaa xakameyn badan taleefankaaga Motorola oo leh amarro cod ah
Moto Voice waa barnaamij casriyeysan oo caan ah oo loogu talagalay qalabka cusub ee cusub ee Motorola
Soo dejiso dhammaan waraaqaha sawirada ee Moto X 2014
Ku soo dejiso waraaqaha gidaarka ee Motorola Moto X 2014 oo leh midabbo muuqda
Qaar ka mid ah sawirro laga qaaday Moto X 2014 oo muujinaya tayada kaamerada taleefankan cusub ee Motorola
Android 4.4.4 wuxuu bilaabmayaa inuu yimaado Moto G
Qodobka aan ku ogaanno warka sheegaya in Android 4.4.4 uu bilaabmayo inuu yimaado Motorola's Moto G
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Motorola Moto 360 smartwatch
Motorola's Moto 360 smartwatch ayaa imaan doona xagaagan. Waxaan kuu soo bandhigeynaa dhammaan macluumaadka aan ka hayno waxa la xiran karo
Miyuu yahay "tattoo dijitaal ah" habka ugu wanaagsan ee lagu furo Moto X?
Tattoo dijitaal ah ayaa ah sharad Motorola amniga iyo furitaanka taleefankaaga casriga ah ee Moto X
Motorola wuxuu xaqiijinayaa inaan ku arki doono Android L gudaha Moto X iyo Moto G
Android L ee Moto X iyo Moto G ayaa joogi doona marka nooca ugu dambeeya ay ugu dambayntii Google sii deyso dayrta soo socota
Motorola waxay sii deyneysaa fiidiyoow muujinaya Moto 360 meel u dhow
Motorola's Moto 360 waa habka seddexaad ee loo yaqaan 'smarwatch' oo ka hooseeya 'Android Wear', qaabka la beddelay ee Android ee dharka xiran.
Sawirka Moto X + 1 ayaa lagu daadiyay qeexitaankiisa suurtagalka ah iyo maalinta la bilaabayo
Waxaa soo ifbaxay sawir ah Moto X + 1 oo ay weheliso qeexitaanno suurtagal ah iyo taariikhda bilaabidda ee dhammaadka bisha Ogos
Imtixaanka dulqaadka, Moto G vs Moto E, yaa ku guuleysan doona khilaafka labada dhinac?
Maanta waxaan wajihi doonnaa mid ka mid ah labada dhinac ee 'Moto G vs Moto E' marka la eego iska caabbinta dhicitaanka shilalka.
Moto aan biyuhu lahayn, miyaadan rumaysanayn?
Motorola Moto G miyuu noqon doonaa mid biyo la’aan ah? Miyay ku dhamaan doontaa H2O muddo 30 daqiiqo ah? Naftaada u fiirso fiidiyowgaan.
Moto E code ayaa loo sii daayay horumariyeyaasha
Motorola waxay soo saartay koodhka Moto E, kaas oo u oggolaan doona horumariyeyaasha inay abuuraan ROMs caadiya
Warshaddii Motorola ayaa xidhey Fort Worth, halka loo sii socdo Shiinaha?
Warshada Motorola ee dalka Mareykanka ayaa xirmi doonta dhamaadka sanadka. Lama oga halka loo soconayo, laakiin Shiinaha ayaa loo malaynayaa inuu yahay waddanka la doortay.
Motorola waxay diyaarisaa Moto X1, ku xigta Moto X
Sawir ah Moto X1, Motorola oo ah taleefan casri ah oo cusub oo wata 5.2 inji, ayaa la shaaciyay
Sida loo furo Moto E bootloader, xididka iyo rakibida soo kabashada gaarka ah
Sida loo furo Moto E bootloader, ROOT iyo rakibida soo kabashada gaarka ah
Samsung Galaxy S5 VS Moto E: Motorola-ka ugu yar ayaa ka dheereeya sumcadda Samsung ee xawaaraha jawaabta
Halkan waxaad ka heleysaa fiidiyoow ay ku wajahayaan Samsung Galaxy S5 VS Moto E, kaas oo Motorola yar uu ku guuleysto xawaaraha fulinta.
Afjaridda Moto E waxay noqon doontaa mid aad u fudud mahad Motorola
Motorola waxay xaqiijisay inay ku dari doonto Moto E barnaamijkeeda Bootloader Unlock sidaa darteed xididka Moto E wuxuu noqon doonaa mid aad u fudud
Ogeysii xiriiriyahaaga xaaladda degdegga ah barnaamijka Motorola Alert ee laga heli karo Moto E iyo Moto G LTE
Codsiga Motorola Alert ayaa hadda loo heli karaa boosteejada Moto E iyo Moto G 4G LTE
Motorola wuxuu soo bandhigayaa Moto G 4G LTE
Motorola wuxuu soo bandhigayaa Moto G 4G LTE, oo ah taleefan casri ah oo dhameystiraya waxa Moto G uu bixiyo, iyadoo lagu daray haysashada booska microSD
Jiilka soo socda ee Moto X iyo Moto G wuxuu sii wadi doonaa inuu lahaado nooc nadiif ah oo Android ah
Lenovo wuxuu Motorola uga tagayaa lacag la’aan, taas oo u oggolaan doonta jiilka soo socda ee Moto X iyo Moto G inay yeeshaan daahir Android ah
Moto E, oo ah laba udub dhexaad u ah 50 euro
Motorola waxay diyaarinaysaa taleefan casri ah oo cusub, Moto E, oo loogu talagalay suuqyada soo kordhaya oo lagu qiimeeyo 50 euro.
Sida loo furo Motorola Moto G Bootloader
Hoos waxaan kuugu tusi doonaa talaabo talaabo waxkasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku furto Motorola Moto G Bootloader talaabo talaabo.
Motorola Moto G waxaa laga heli karaa Media Markt 179 Euros
Waxaan horey u haysannay Motorola Moto G oo laga heli karo Media Markt si toos ah looga iibiyo dadweynaha qaddar dhan 179 euro.
Motorola G oo horay loogu iibiyay Spain iyadoo loo marayo Amazon
Waxaan hadda ku keydin karnaa Motorola G-gaaga bogga rasmiga ah ee Amazon Spain qiimo dhan 175 Euros.
Google waxay tusaale u tahay inay raacdo Motorola iyo cusbooneysiinteeda Android 4.4 Kit Kat
Google waxay dhigtaa baytariyada waxayna ujeedadeedu tahay inay tusaale ka dhigto Motorola iyo cusboonaysiin ballaadhan oo ku saabsan terminaalkeeda Android.
SuperOneClick waa la cusbooneysiiyay si ay u taageeraan boosteejooyinka Motorola
Soo dejiso nooca ugu dambeeyay ee SuperOneClick oo ay ku jiraan taageerada moodooyinka cusub ee terminal, oo ay ku jiraan Motorola iyo LG.
Motorola ayaa sii deysay koodhka isha ee loo yaqaan 'Droid X terminal' waxaana laga heli karaa websaydhada shirkadda Maraykanka laga leeyahay ee soosaarayaasha.
Motorola maanta waxay soo bandhigtay terminalkeeda Motorola Droid X runtiina waxay leedahay astaamo aad u fiican.
Barashada Nandroid ee kaabta Motorola Milestone
Hagaag, markaad aragto sameynta keydka mararka qaarkood waxay noqoneysaa odyssey, sidee ugufiican ee loo dhajiyaa cashar si loo fududeeyo?
[Mod] Cusboonaysii Android 2.0.1 ilaa 2.1 gudaha Motorola Milestone
Sida loo cusbooneysiiyo roma ka socota Android 2.0.1 ilaa Android 2.1 Motorola Milestone
Motorola Quench ama Motorola Cliq XT, Android 2.1 oo leh Motoblur
Motorola ma joojineyso ku dhawaaqida boosteejooyinka nidaamka Android haddase waxaa la joogaa Motorola Cliq XT ...
Sida loo helo marin u helka Motorola Milestone
Buug si aad ugu hesho marinka xididka Motorola Milestone, fudud oo cad.
Dhibaato xagga amniga ah ayaa laga helaa nooca Android 2.0.1 oo leh ku dhowaad dhammaan terminaalka Motorola Droid ee lagu rakibay Mareykanka
Sida loo helo marinka xididka Motorola Cliq
Motorola Cliq, oo ku taal Spain iyo Mareykanka dibadiisa waxaan u naqaanaa Motorola Dext waa la xididaystay
Koodhadhka Motorola Milestone waxaan ku heli karnaa taxane gaaban oo la mid ah sida aan ku sameyno kumbuyuutarka PC. In yar baan idiinka tegayaa
DUKAANKA, Motorola's Android Market
Motorola waxay diyaarinaysaa suuqgeeda gaarka ah ee loo yaqaan “Android Market” waxaana loogu yeeri doonaa Shop4apps, kaasoo laga heli karo taleefanka gacanta iyo kombuyuutarka labadaba.
SIDEE LOOGU HELI KARAA ROOT ACCESS EE MOTOROLA DROID
Laga soo bilaabo shalay waxaa horeyba suurtagal u ahayd helitaanka xididka marinka Motorola Droid waana mid aad u fudud.
DIB U EEGISTA MOTOROLA MILESTONE OO Qoto Dheer
Motorola Milesotne, Terminalka kaliya ee wata Android 2.0 ayaa soo gaadhay gacmaheena waxaanan ku samaynay baaritaan buuxa.
Waxaa jira isticmaaleyaal badan oo dhibaatooyin kala kulma shirkadooda Motorola Droid iyo sida ay yiraahdaan waa sababta oo ah Android 2.0